Factorylọ ọrụ China High Security Palisade Fence factory na ndị na-emepụta | Hangtong
Ogige palisade na-enye ihe kachasị mma dị na nchekwa nchekwa, mgbidi ga-adịgide adịgide na ọnụ ahịa dị ọnụ ala. Imzọ iji wụnye, ihe ndị ahụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ tupu ịhapụ ụlọ ọrụ anyị, ọ nweghịkwa ịgbado ọkụ,
ịcha ma ọ bụ mkpọpu mmiri dị mkpa, na-ahụ maka nchebe corrosion na mkpokọta ma belata oge nrụnye na ụgwọ ọrụ.
Palisade dị nchebe karịa na usoro fencing ndị ọzọ, yabụ, ebe nchekwa ọ bụla dị mkpa, a na-eji Palisade eme ihe .Pteel palisade na-ewu ewu karịsịa maka ụlọ akwụkwọ, ogige na saịtị ụlọ ọrụ n'ihi oke mmebi ya na eziokwu na ọ siri ike ịrịgo ma ọ bụrụ b kwụrụ n’elu icha mmirimmiri.
Dị ka onye na-emepụta fọdụl palisade, HT-Fence na-enye ma “W” ma ọ bụ “D” ụdị nke palisade fencing 70 obosara na ụdị obosara 62, na iguzosi ike n'ezi ihe nke palisade site na ụzọ abụọ ma ọ bụ atọ nke na-eji dị ka ọkọlọtọ na falisade fences ruo atọ mita elu. Agbanyeghị, anyị nwere ike ịnye ihe ndị ọzọ dị elu nke okirikiri palisade dịka ịchọrọ.
Njirimara ogige palisade
1. Bọta paịlị elu maka mgbochi ịrị. Meewanye nchekwa dị elu, gbakwunye waya concertina dị.
2. Bolt-on Palisade nwere ike itinye ya site n'aka ndị ọrụ nwere ọgụgụ isi dịka enweghị ịgbado ọkụ na saịtị ahụ.
3. Bolt-on Palisade fencing na-ebufe n'ụzọ dị mfe. Ihe ndị mejupụtara ya bụ na ngwugwu.
4. Bolt-on Palisade fencing nke emere iji kpoo oku na-adabeghị site na ntughari na saịtị.
5. Bolt-on Palisade fencing nwere ike ibughari ya na uzo ozo di nfe.
6. HT-Fence Palisade fencing bụ modular.Sections nwere ike dochie ya n'ụzọ dị mfe ma ọ bụrụ na ugbo ala, osisi na-ada, wdg.
7. HT-Fence Palisade fencing bụ modular.Sections nwere ike dochie ya n'ụzọ dị mfe ma ọ bụrụ na ugbo ala, osisi na-ada, wdg.
8. Imewe mara mma ile anya
9. Efu erughi ala n’ọkuku nchebe dị elu
10. Ogologo oge iji gbochie nchara nchara, Izu oke corrosion ike karịa afọ 10.
A na-ejikarị ya na NTA, NET ỌR,, Mmiri, ụlọ ọrụ TELECOM. EGO, GARDEN, ISOLATED OF ROAD, SITE, SANTA OBI, ETC.
D akụkụ ngalaba: 65mm
Ilszọ ụgbọ elu
Lecha Mee Nnukwu
Mm nke Pale
2 / 2,5 / 3 / 3.5mm
Ngalaba D Pale: 62mm
40 × 40 × 4mm ma ọ bụ
Cha na-eji obere ígwè dị ọcha (ojii ma ọ bụ galvanized)
Orilọ kwụ ọtọ: ọkọlọtọ okporo ụzọ 50 × 50 × 6mm
Post iji m beam (IPE 100 × 55mm, IPE 100 × 68mm, 120 × 74mm) ma ọ bụ post post (80 × 80,100 × 100mm)
Ndozi: efere ọla: 40 × 8 × 150mm
Bọt: M8 × 30, M12 × 30 anti-vandal steel ma ọ bụ igwe anaghị agba nchara
Elu: Galvanized ma ọ bụ galvanized wee mkpuchi mkpuchi ntụ
Nkwụghachi ụgwọ ịkwụ ụgwọ: T / T 30% dị ka nkwụnye ego, nguzozi megidere inweta akwụkwọ B / L.
Nke gara aga: 3Ddị Vetikal na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ
Na-esote: W Pale Palisade Fence